Zvakanakisisa. Dhinda Regedzo. Ever. | Martech Zone
Isu tinowana mirwi yemapepanhau kuburitsa mubhokisi redu rekunyora zuva rega rega uye ndiri kufungidzira kuti 99% yadzo dzadzimwa nekungotarisa. Izvi hazvireve kuti hazvina zvazvinobatsira… isu tinogara takatarisira chikamu chakakodzera chenhau chinokanganisa imi vanhu munharaunda medu. Kubatsira kwekuburitswa kwemapepanhau ndiko kugoverwa kunoshanda… zvakashata ndezvekuti zvinowanzo nyorwa zvisina tsarukano uyezve - zvisina kunangana.
Patakabvunza Dittoe PR, yedu Public Relations vadyidzani, kushambadzira kuburitsa pane yedu iPhone kunyorera, ivo vakadzoka ne nhare mbozha app kuburitswa izvo zvaive zvisinganakidze kusagovana. Ndinovimba unonakidzwa nazvo zvakanyanya sezvatakaita… takawana mhinduro yakanaka!
Martech Zone Inotangisa Yekutanga-Yese Hype-Yemahara Mobile App
INDIANAPOLIS- Pakati pe mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nemazana manomwe ezviuru zve "shanduko," "yekucheka-mhanya" uye "kufunga-kuridza" nharembozha dzinoburitsa Apple's App Store, Martech Zone iri kutora danho rakashinga nhasi nekutanga iyo nyowani nharembozha yekushandisa pasina kunyanya kushandisa mabuzzwords kana hyperbole.
An online sosi yekushambadzira tekinoroji nhau, zvigadzirwa kuongororwa, masevhisi uye akanakisa maitiro ayo akaverengerwa ari "Ekumusoro Ekushambadzira Blog" ne Kushambadzira Zera reSimba 150, Martech Zone iri kusimbisa nzvimbo yayo munhoroondo neiyo chete iOS app yekumisikidza pasina chinangwa chero chipi zvacho chekuvandudza tekinoroji yefoni kana kuunza "mutambo wekuchinja" kune indasitiri yekushambadzira.
Martech Zone app inongobvumidza vashandisi kuverenga, kugovana uye kusevha zvazvino zvinyorwa, magwara, infographics uye sei-tos kushambadzira kwepamhepo, kushambadzira kwakawanda, kushambadzira zvemukati, kushambadzira injini yekushambadzira, kushambadzira nhare, kushambadzira midhiya yenhau uye nezvimwe.
Kunyangwe kushoropodzwa kwakasimba kubva kumaindasitiri pundits vanopokana izvozvo Martech Zone muvambi Douglas Karr inofanirwa kuwedzera mukana uyu kunyanyisa kuwanda kweiyo app nyowani pane inoitika dhijitari, iyo inoshambadzira inbound yekushambadzira nyanzvi inoramba yakashinga munzira yake inoshanda.
Isu tanga tichida kuti zvirimo zvedu zviwanikwe nyore nyore nevaverengi nenzira iri kukurumidza kukura, ”akadaro Karr. “Pane nguva apo ini ndaive naysayer nezve mobile application. Ini ndaifunga kuti isu taifanira kungomirira kusvika HTML5 uye nhare dzebhurawuza dzave pano uye maapplication aigona kungonyangarika nzira yedesktop software. Asi, ivo havana, uye iyo nguva yenguva iyo vanhu vari kushandisa pama mobile apps inoenderera ichikwira.
Pakati paZvita 2011 naZvita 2012, avhareji yenguva yakashandiswa uchishandisa nharembozha yakakwira zvikamu makumi matatu neshanu kubva pamaminitsi makumi mapfumbamwe nemana kusvika pamakumi maviri nemana pazuva, nepo kubhurawuza paWebhu kwakadonha zvishoma, maererano neshumo yazvino yemaitiro eUS nharembozha analytics simba Flurry.
Akurudzirwa nemukana uri kukura wekuita vateereri kuburikidza nharembozha, Karr akarova ruzivo rwevashandisi ruzivo pa Postano Nhare kuvaka app ye Martech Zone.
Ivo vanhu vePostano havana kusiya chero dombo risina kushandurwa, akadaro Karr. Vakavaka chishandiso chakanyatsogadzirwa-kubva muchikamu chekubatanidza kuenda kune yakasanganiswa podcast.
Kuchengeta iyo vakasununguka Martech Zone app, shanyira iTunes App Store.
Tags: dittoe prdittoe hukama hweveruzhinjikunyora sei kuburitswaKushambadzira Podcastpostanopostano nhareprdzvanyamuchinda wekuparadziramupepanhauhukama hwevanhu
Kukadzi 16, 2013 na5: 36 PM
Iyi blog posvo yakakwana zvakakwana mukuyedza kwayo kutsanangura chigadzirwa chandinotendera.
Iyo app inokwana zvakakwana mukugadzirwa kwayo. Ini ndinorikurudzira pasina kuchengetedza, asiwo pasina kukurumidza kushamisika. Avo vanofarira zvirimo pane ino saiti vanofanirwa kurodha pasi iyi software package, asi havafanire kutyora nguva, kufuratira shamwari kana mhuri, kurega kudya, kana kuramba kurapwa.
Ndokumbira utarise kurodha pasi. Kana, enda unotamba kunze. Chero chaunoda.
Kukadzi 16, 2013 na7: 05 PM
Ini ndinochida kwazvo! Kushambadzira kwakanyanya kunonakidza pamwe nekumisikidzwa kukuru. Saka iyo droid vhezheni iri kuburitswa riini? ;-)
Tinovimba munguva pfupi!